သီးသန့် Samsung S-Health ပုံများ Androidsis
ဖြစ်နိုင်သည့် Samsung S-Health update ၏ထူးခြားသောပုံများ
Francisco Ruiz | | Android application များ, Samsung
နောက်တစ်ခါ Sammobile.com သည်မူလ application ၏ interface အသစ်ဖြစ်လာမယ့်အရာများကိုပြီးပြည့်စုံသော screenshots များပေးသည် Samsung S- ကျန်းမာရေး နှင့်အသစ်ကဖြန့်ချိနိုင်ပါတယ် Samsung ရဲ့ Galaxy S5 ဒါကလက်တွေ့ကျလိမ့်မယ်.
ဤ screenshots များတွင် application ၏တရားဝင် update သည်၊ စိတ် ၀ င်စားစရာဂရပ်ဖစ်ပြုပြင်မွမ်းမံမှုအသစ်များနှင့်ဝေးကွာနေပုံကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်နိုင်သည်။ Google ကသတ်မှတ်လမ်းညွှန်ချက်များ Android application များအတွက်လိုက်နာရမည့်အချက်များနှင့်မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း၎င်းတို့သည်လုံးဝပြားသော interface ကိုရွေးချယ်လိမ့်မည် အန်းဒရွိုက် 4.4 Kit Kat.
ယောက်ျားတွေကနေဖမ်းယူ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်သည် Sammobile.comတရားဝင်အက်ပလီကေးရှင်းများမှတိုက်ရိုက်မည်သို့ယူဆောင်သွားသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့စစ်ဆေးနိုင်သည် Samsung ရဲ့ Galaxy S5 modelo SM-G900H၎င်းသည်အမြင်အာရုံပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများနှင့်ထပ်မံလုပ်ဆောင်ချက်အသစ်များအနေဖြင့်လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိပါ။
ဤအအသစ်ကဆက်ပြောသည်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းများထဲတွင်ကျွန်တော်မီးမောင်းထိုးပြနိုင်ဘူး မြေပုံပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏တည်နေရာကိုကြည့်ဖို့ option ဒါမှမဟုတ်တူညီတဲ့မျက်နှာပြင်ကနေဖြစ်နိုင်ခြေ ဂီတပြန်ဖွင့်ခြင်းကိုထိန်းချုပ်သည် ငါတို့အကြိုက်ဆုံးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုလုပ်နေတုန်းမှာကစားနေတယ်။
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ဒီအကြားသဘောတူညီချက်ယူဆနိုင်သည့်အတွက်ဥပမာတစ်ခုအဖြစ်ပထမ ဦး ဆုံး application ကိုဖြစ်ပါတယ် Samsung နှင့် Google Android terminals များ၏စိတ်ကြိုက်ပြုခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောရာထူးများကိုချဉ်းကပ်ခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး ချင်းစီ၏ပုံမှန်မဟုတ်သောစိတ်ကြိုက်အလွှာများကိုဘေးဖယ်ထားရန် အန်းဒရွိုက် operating system ကို အမှန်တကယ်စိတ်အညစ်နှင့်အနတ္တ။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက - Samsung Galaxy S5, တရားဝင်ဖြန့်ချိခြင်းမပြုမီဝယ်ယူနိုင်သောဆက်စပ်ပစ္စည်းများ.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Samsung » ဖြစ်နိုင်သည့် Samsung S-Health update ၏ထူးခြားသောပုံများ